हिन्दू भनेका भारतीय हुन्, नेपालीहरु शैव, मस्टोपुजक र सनातन हौं – Lokpati.com
नेपाल प्रहरी अपराध प्रचण्ड केपी शर्मा ओली चितवन नेपाली काँग्रेस पक्राउ राशिफल अमेरिका मृत्यु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड सरकार नेकपा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
By लाेकपाटी न्यूज Last updated Nov 1, 2019
एउटा लेखमा तपाईंले हिन्दु धर्मभित्रको शैव मत नेपाली हो र वैष्णव मत विदेशी हो भन्नुभएको छ। यसरी ‘माइक्रो लेभल’मै गएर ‘ह्वी एन्ड अदर्स’को सीमा कोर्दा यसले समाजलाई विभाजन र विग्रहमा लैजान्छ, होइन र ?
अवश्य। सनातन परम्पराभित्र रहेर पनि जसले एक अर्को मतलाई छिछि र दूरदूर गर्छ त्यो नेपाली धार होइन। सनानत परम्पराको मर्म नै धर्म सापेक्षता तर पन्थ निरपेक्षता हो। झोल, काट्नु जस्ता शब्द उच्चारणसमेत गर्न नहुने, टीकाका दर्जनौं आकारप्रकारअनुसार गुट बाँध्ने यस्तो प्रथाले बरु समाजलाई विभाजन र विग्रहमा लैजान्छ। तपाईंले मलाई होइन, तिनलाई विग्रहकारी भन्न सक्नुपर्यो।
मगर समुदायमाझ प्रचलित पाङ्दुरे नाच शिवको ताण्डव नृत्यको जरो हो भनेर ‘असंगति’मा दाबी गर्नुभएको छ। यस्तो लेख्दा तपाईंमाथि गैरहिन्दु जनजातिहरूलाई हिन्दुत्वको घानमा हाल्न खोजेको आरोप लाग्दैन ?
फेरि पनि बुझाइ गलत लाग्छ। शिवलाई नेपालका सबैले पुज्छन्। त्यस यथार्थलाई भारतीयहरूले पनि ग्रहण गरेका हुन्। तर, अब शिवभन्दा हिन्दु जस्तो बुझिन थालेको छ। आफ्नो परिचय गुमाएपछि यस्तै अनर्थकारी व्याख्या हुन्छ। तैपनि एउटा कुरा भनिहालौं, मैले आफूलाई कहिल्यै हिन्दु भनेको छैन। हामी नेपाली हिन्दु होइनौं, शैव हौं। मस्टोपुजक हौं, सनातन हौं। हिन्दु भनेका भारतीय हुन्।
विगतमा दर्जनपटक मञ्चमा उभिएर बोल्नुपर्दा पनि मैले संविधान हिन्दु होइन सनानत धर्मसापेक्ष हुनुपर्छ भनेकै छु। खोजिदिनुहोला भिडियो रेकर्ड। राई, मगर, लिम्बू, गुरुङ, थारू सबैलाई समेट्नुपर्छ भनेर आदि धर्मसापेक्ष संविधान भन्ने लेख नै लेखेको छु। यसैले गैरहिन्दुलाई कसरी हिन्दु, कहिले हिन्दु, कहाँबाट हिन्दु घानमा हाल्न खोजेँ मैले ?
हिन्दु भनेको सन् १०५० मा मुसलमानले धपाएर अहिलेको यूपी र बिहारबाट धमाधम तराईमा छिरेकाहरू हुन्। पहाडमा बस्ने तर मस्टो पूजा नगर्ने र बोन्पो नमान्नेहरू पनि भारतबाटै कुनै समयमा आएका हिन्दु हुन्। हामी सबै समेटिने शब्द भनेको हिन्दु होइन, ओमकार परिवार हो।
(‘असंगति’को सेरोफेरोमा सौरभसँग उनको लेखन, विषयवस्तु र समकालीन सन्दर्भमाथि अन्नपूर्ण पोष्टका लागि दीपक सापकोटाले गरेको कुराकानीबाट केही अंश साभार। प्रासाङ्गिक ठानेर सानो अंश प्रकाशित गरेका छौं।)
भवानीको चाैबिसाैं साधारण सभा सम्पन्न